လီဗာမိုရီယမ် - ဝီကီပီးဒီးယား
မော်စကိုဗီယမ် ← လီဗာမိုရီယမ် → တန်နဆီး
အတည်ငြိမ်ဆုံး လီဗာမိုရီယမ်၏ အိုင်ဆိုတုပ်များ
syn 8.3 ms α 10.84 286Fl
syn 19 ms α 10.74 287Fl
syn 13 ms α 10.66 288Fl
syn 57 ms α 10.54 289Fl
syn 54 ms? α 10.5? 290Fl
လီဗာမိုရီယမ် (Livermorium)သည် လူလုပ်ဒြပ်စင်အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပြီး သင်္ကေတမှာ Lv ဖြစ်သည်။ အက်တမ်အမှတ်စဉ် ၁၁၆ ဖြစ်၍ ရေဒီယိုသတ္တုကြွမှုအလွန်အားကောင်းသော ဒြပ်စင်တမျိုးဖြစ်သည်။ ၁၉၉၉ခုနှစ်တွင် Lawrence Berkeley အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဓာတ်ခွဲခန်းမှထုတ်ဝေသော Physical Review Letters စာစောင်၌ ဒြပ်စင်အမှတ်စဉ် ၁၁၆ နှင့် ၁၁၈တို့အားရှာဖွေတွေ့ရှိကြောင်း သုတေသနပြုလုပ်သူများက အတည်ပြုကြေညာခဲ့သည်။ ၎င်းနှစ်နောက်ပိုင်း၌ သူတို့၏ကြေညာချက်များသည် အခြားသောသုတေသနပြုလုပ်သူများ၏ တွေ့ရှိချက်များနှင့် အငြင်းပွားဖွယ်ရာများဖြစ်စေခဲ့သည်။ ၂၀ဝ၂ ခုနှစ် ဇူလှိုင်လတွင် Lawrence Berkeley အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဓာတ်ခွဲခန်း စီစဉ်ညွှန်ကြားသူ(Director) မှ စာရေးဆရာ Victor Ninov ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည့် ၎င်းဒြပ်စင်နှစ်ခု၏အဓိကကျသော အချက်အလက်များကို အခြေခံ၍ မူလကြေညာချက်သည် မှန်ကန်ကြောင်း အခိုင်အမာအတည်ပြုနိုင်ခဲ့သည်။
Ununhexium အမည်သည် ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သောဒြပ်စင်အမှတ် ၁၁၆ အတွက် သိပ္ပံပညာရပ်ဆိုင်ရာအမှတ်အသားအဖြစ် Latinate ဘာသာအရ “one-one-six-ium” (“ium” beingastandard ending for element names)ဟုခေါ်ဝေါ်သတ်မှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ Ununhexium သည် transuranic (transuranic elements=ransuranium element, chemical element with an atomic number greater than 92 (which is the atomic number of uranium))ဒြပ်စင်များကဲ့သို့ဓာတ်ခွဲခန်းမှသာ ထုတ်ယူရရှိနိုင်သည့်ဒြပ်စင်ဖြစ်ပြီး လက်ရှိအချိန်တွင် လီဗာမိုရီယမ် အမည်ဖြစ်အတည်ပြုထားသည်။
Periodic ဇယားအတွင်းရှိ လီဗာမိုရီယမ် ဒြပ်စင်၏တည်နေရာအရ ၎င်း၏ဂုဏ်သတ္တိများသည် Polonium ဒြပ်စင်နှင့် Tellurium ဒြပ်စင် တို့၏ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်တူညီမှုရှိနိုင်ကြောင်းခန့်မှန်းကြသည်။
လီဗာမိုရီယမ် ဒြပ်စင်၏သက်တမ်းဝက်(half-life)သည် အလွန်တိုသောကြောင့် ပတ်ဝန်ကျင်သို့ ၎င်းဒြပ်စင်၏သက်ရောက်မှုများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားစရာမလိုပါ။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ကိုးကား အမှား - Invalid <ref> tag; no text was provided for refs named Haire
↑ ၂.၀ ၂.၁ ၂.၂ ၂.၃ ၂.၄ "Predicting the Properties of the 113–120 Transactinide Elements" (1981). Journal of Physical Chemistry 85 (9): 1177–1186. American Chemical Society. doi:10.1021/j150609a021.
↑ ၃.၀ ၃.၁ ၃.၂ ၃.၃ "Superheavy elements:aprediction of their chemical and physical properties" (1975). Recent Impact of Physics on Inorganic Chemistry 21: 89–144. doi:10.1007/BFb0116498. Retrieved on4October 2013.
↑ Element 114 is Named Flerovium and Element 116 is Named Livermorium။ IUPAC (30 May 2012)။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=လီဗာမိုရီယမ်&oldid=723102" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁ ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၄:၂၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။